Wararka - Badbaadada taageerayaasha warshadaha
Taageerada warshadaha Bejarm waa mid la saari karo oo si hufan loogu rakibi karo, way fududahay in la isticmaalo waxayna ku guuleysan kartaa hadafka qaboojinta degdegga ah. Soo-saareyaashu waxay leeyihiin aqoonsi heer sare ah oo loogu talagalay saameynta qaboojinta ee taageeraha Bejarm. Si kastaba ha noqotee, markii ay la kulmaan taageerayaal aad u weyn, soo saarayaasha wali shaki ayey ka qabaan dhibaatooyinka xagga nabadgelyada. Maanta, aan wada aragno waxqabadka ilaalinta amniga ee taageere warshad Bejarm ah!
Aaladda sare ee qalabka
Fasalka 8.8 handarraabbadeedii xoogga-weynaa, qufulka lowska ayaa iska ilaalin kara dabacsanaanta, u gudbaya darbiga, yareynaya halista taageereyaashu ku dhici karaan inta badan, hagaajinta xasilloonida.
Afarta fiilooyin ayaa lagu hagaajin karaa saqafka, xooganaanta walbahaarka ee xarig walboo bir ah ayaa gaari kara 1000kg. Waxaan u adeegsanaa qalabka adkeynta, afarta fiilooyinna waa la adkeyn karaa isla waqtigaas si loo kordhiyo awoodda xamuulka, si loo wanaajiyo amniga iyo xasilloonida marawaxadda.
Giraanta badbaadada Double
Xidhiidhka ka dhexeeya garbaha faneedyada dhaqanka iyo garabka daabku way fududahay in lagu dabciyo wareegga muddada-dheer, taas oo keenta in garbaha jajabaan ama dhacaan. Si kastaba ha noqotee, giraanta badbaadada taageereyaashu waxay isku xirtaa dhammaan qaybaha, qayb kasta oo iskuxirana waxay kuxirantahay boolal. Giraanta badbaadada laba-geesoodka ah ayaa kaalin difaac leh haddii uu shil dhaco waxayna ka hortagtaa in qaybo ka mid ah ay siibato.
Daaha daboolka ah si loo yareeyo miisaanka
Mashiinka marawaxadaha ayaa laga sameeyay aluminium duulimaadka magnesium alloy, kaas oo miisaankiisu yahay mid fudud, cufnaan hooseeya, ku wanaagsan kala-baxa kuleylka, oo ku adkaysanaya iska caabbinta cadaadiska, wuxuuna yareynayaa awoodda xamuulka qaada ee marawaxadda. Shirkaddayadu waxay qaadataa jarista godadka si loo yareeyo miisaanka, iyo saddex baararka birta ah si loo xoojiyo adkaanta, si markaa si wax ku ool ah loo yareeyo halista fallaadhaha jabka iyo in la xoojiyo ilaalinta amniga.
Xakamaynta wadahadalka soo noqnoqda; La socodka waqtiga dhabta ah
Nidaamka xakamaynta is-beddelka soo noqnoqda ayaa la socon kara xaaladda marawaxadda wakhti kasta, si habsami leh u habeyn kara xawaaraha dabaysha, wuxuuna leeyahay nidaam ilaalin xad dhaaf ah oo u gaar ah oo loogu talagalay ilaalinta amniga, si loo yareeyo heerka dhicitaanka, si wax ku ool ah loo kordhiyo nolosha adeegga.